Waa maxay sababta Gokai - Shanghai Gokai Industry Co., Ltd.
Soo saaraha xirfadlaha ah ee guddiga iyo xaashida
Shanghai Gokai Industry Co., Ltd. waxay ku takhasustay cilmi baarista, horumarinta, soo saarida guddiga xumbo PVC, Xaashida looxa inta badan. Shirkadda waxaa la aasaasay 2009, waxaa jira 2 warshadood, 10 khadadka wax soo saarka, xarunta waxay ku taal Shanghai, Shiinaha. Waxaan soo bandhignay qalab wax soo saar horumarsan iyo farsamo farsameyn, sidoo kale qalabka aduunka hogaaminaya iyo khibrad qani ku ah howshan. Kuwani dhammaantood waxay awood u siinayaan Gokai inuu soo saaro guddiga xumbo ee PVC, xaashida acrylic, oo leh tayo aad u fiican. Waxay si buuxda ugu habboon tahay shuruudaha suuqa.
Wax soo saarkayagu badanaa waa loo dhoofiyaa, sida Argentina, Brazil, Canada, Nigeria, Mexico, Saudi Arabia, UAE, UK, USA, Malaysia, Thailand, Vietnam, Spain, Romania, Algeria adduunka oo dhan. Waxaan sidoo kale nahay SGS Hanti-dhowrka Audited. Oo waxaannu gudubnaa shahaadada CE. Waxaan diirada saareynaa tayada aan qaadano qaababka xakamaynta tayada adag si loo hubiyo kalsoonida tayada wax soo saarka.
Gokai ee Guddiga xumbo ee PVC:
Sidoo kale waxaa loogu magac daray xaashi xumbo PVC ah.Waxaanu soo bandhigeynaa guddiga xumbada PVC xayeysiinta, Qalabka Dhismaha Qalabka xumbo PVC, Furniture PVC foam foam. Dhumucdiisuna 1mm ilaa 30mm. Wax soo saarkayaga ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa alaabta guryaha, xayeysiinta, qalabka dhismaha, qurxinta iyo codsiyada warshadaha iyo beeraha kale.
Gokai ee Xaashida looxa:
Sidoo kale waxaa loo magacaabay xaashida plexiglass. Waxaan bixinaa xaashida looxa loo yaqaan 'Cast acrylic sheet' iyo 'Extrude acrylic sheet, Acrylic Mirror sheet, Acrylic Light Guide Sheet, Acrylic sheet inta badan loo isticmaalo xayeysiinta, laydhka, warshadaha dhismaha, farshaxan, qurxin iyo waliba tubbada, musqusha. Dhumucdiisuna 1-500mm. Nidaamyada waxsoosaarka ee horumarsan waxay xaqiijinayaan xaashida acrylic inay leedahay adkaansho aad u fiican, xoog iyo iska caabin kiimiko ah oo ka sarreeya.
Gaarsiinta degdegga ah
Waxaan leenahay 10 khadadka wax soo saarka, 1 * 20GP oo ku saabsan 10 maalmood si loo dhammeeyo, 1 * 40GP oo ku saabsan 15days ilaa dhammaadka.
Waxaan haynaa 200 oo shaqaale ah, in kabadan 20 injineerro farsamo ah 80% kamid ahna waxay haystaan ​​shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Qalabka ceyriin waa 100% bikro ah.
Wax soo saarka caadiga ah.
Xirmada dhoofinta iyo golaha khaaska ah.
Gudiga xumbada PVC waxay isticmaalaan bac balaastik ah oo leh ilaalada geeska, ama sanduuqa kartoonka iyo santuuqa alwaax.
Bac balaastik ah oo ay ku jiraan ilaalada geeska
Raridda weelka bacda Caagga ah
Raritaanka weelka sanduuqa kartoonka
Raridda weelka baaldiga alwaax
Xaashida looxa waxaa loo isticmaalaa filimka PE ama warqad kraft ah, ka dibna sariirtaada alwaaxa la isticmaalay.
Labada dhinac ee filimka PE ama warqad gacmeed
Sariirta qoryaha ee xirmada
Weel xamuul ah
Cabbirro habaysan iyo dhumuc iyo midab ayaa la heli karaa. Ku soo dhowow inaad nala wadaagto fikraddaada, aan ka wada shaqeyno sidii nolosha looga dhigi lahaa mid hal abuur leh.
KOOXDA GOKAI IYO DHAQANKA SHAQADA
Shirkaduhu waxay u hoggaansamaan hufnaanta rukunka, tayada badbaadada, sayniska iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda sida xoogga wadista, raacdada heer sare, waxay abuuraan tayo aan caadi ahayn. Waxaan diyaar u nahay inaan si daacad ah ulashaqeyno macaamiisha dal iyo dibadba si aan ula jaanqaadno waqtiyada isla markaana aan u abuurno bilic wadajir ah.
Gokai had iyo jeer wuxuu u hoggaansamaa mabda'a, u janjeedha dadka, maareynta sharafta, tayada ugu sarreysa, sumcad qiimo leh.
Hal-abuurnimadu waa udub dhexaadka dhaqanka Gokai.
Hal-abuurnimadu waxay u horseedaa horumar, taas oo horseedda xoog koror, Dhammaan waxay ka soo baxaan hal-abuurnimo.
Gokai wuxuu leeyahay dareen xoogan oo masuuliyad iyo hadaf u ah macaamiisha iyo bulshada.
Waxay had iyo jeer ahayd xoogga dhaqaajiya horumarka Gokai.
Iskaashigu waa isha horumarka.
Wada shaqeynta si loo abuuro xaalad guul-guul ah ayaa loo arkaa inay tahay hadaf aad muhiim ugu ah horumarka shirkadaha.
GOKAI MACAAMIISHA OO QIIMAYNAYA
Macaamiilku wuxuu booqdaa Bandhigga Gokai
Guddiga xumbo PCV ee amarka: 5 Xiddig
Xaashida looxa ee looxa: 5 Xiddig